Zithini izibonelelo zokuthenga ukuthanda kweYouTube?
Ukunyusa ukugcinwa ngokuboniswa kukufanele ukubukela
Ukuthanda kunceda ukwandisa iiNjini zeeNjini zokuKhangela
Ukuhanjiswa okukhuselekileyo nokuqinisekileyo
I-100% AdSense ikhuselekile!
Ukuthandwa kuhlangulwe kubantu bokwenyani- Azikho iibhotshi!
Sisoloko siHambisa ngaphezulu koKuyalela kwakho!
Iziphumo ziQalile ukubonakala kwiiYure ze24-72
Iingcebiso eziBalulekileyo xa uThenga ukuthandwa kukaYouTube ukukhulisa isitishi sakho
Alithandabuzeki elokuba iYouTube yenye yezona nkonzo zinkulu zokusasaza ividiyo emhlabeni namhlanje. Ngokuka a Ingxelo yeStatista, uphando lubonise ukuba inxalenye enkulu yabasebenzisi base-US (74%) bachitha ixesha labo elininzi kwi-YouTube. Liqonga elivumela abantu ukuba babelane ngeevidiyo zabo eqongeni kwaye benze isiseko sabaphulaphuli abazinikeleyo. Aba baphulaphuli banokuthumela izimvo, njengeevidiyo, kwaye babelane ngomxholo nabahlobo babo.
Ukuthanda, iimbono, kunye namagqabantshintshi ziimitha ezibaluleke kakhulu kulo naliphi na ijelo likaYouTube. Oku kungenxa yokuba i-algorithm yeYouTube yenzelwe ukuthanda amajelo kunye neevidiyo ezibonisa iimetriki ezilungileyo. Ukufumana ngakumbi okufana kuthetha ukuba umxholo wakho kunye netshaneli kunokwenzeka ukuba linyukele phezulu kwiziphumo zophando kunye nezindululo. Iindlela ezahlukeneyo zinokusetyenziswa ukufumana ukuthandwa ngakumbi kwiividiyo zakho. Unako kwakhona thenga ukuthanda kweYouTube ukusuka kwi-YTpals, kwaye ubukele itshaneli yakho ikhula. Eli nqaku liza kuxoxa ngokubaluleka kokuthandwa kuYouTube kunye nezicwangciso ezahlukeneyo onokuthi uzisebenzise ukuze ukwandise.
I-algorithm kaYouTube kunye nokubaluleka kokuthandwa
Kukho iindlela ezintathu ezahlukeneyo zokusebenzisa i-algorithms ezisetyenziswa kuYouTube, ezisebenzisa iimetrikhi ukukhetha iividiyo zeengcebiso. Enye i-algorithm ikhetha iividiyo ezithile ukuba ziboniswe kwiphepha lasekhaya lomsebenzisi, ngelixa enye ichonga ezinye iividiyo ezifanelekileyo ezicetyiswayo kubabukeli. Ngokuphathelele i-algorithm yesithathu, ikhetha ukhetho olulandelayo lwevidiyo ezenzekelayo xa ababukeli bebukele ividiyo. Xa iYouTube ikhetha iividiyo eziza kuqaqambisa, enye yezona ndlela zibalulekileyo azithathela ingqalelo linani lokuthandwa. Okuthandwayo kwandisa ukubakho kwevidiyo ebekwe phezulu kwiziphumo zophando kunye neengcebiso. Ukuba ividiyo yakho ifumana inani elikhulu lokuthandwa ngexesha elifutshane, ngoko inokufumana ukuthandwa eqongeni ngokukhawuleza.
Ukuthandwa kukaYouTube kubaluleke kakhulu kwitshaneli. Ixelela i-algorithm yeYouTube kunye nababukeli ukuba iireyithi zokubandakanyeka kwabaphulaphuli bakho zifanelekile ukuba ziqatshelwe. Unokufumana isishwankathelo seemethrikhi zakho zeYouTube kwicandelo lohlalutyo. Oku kuya kukuxelela ngeevidiyo eziye zafumana ukuthandwa kakhulu kunye nezo zingafumananga ukubandakanyeka kwabaphulaphuli. Xa ababukeli abatsha bebukele iividiyo zakho, bakholisa ukusekela isigwebo sabo malunga nokuzibandakanya okufumanayo kubabhalisi bakho bangoku okanye ababukeli.
Kukho amaxesha apho ufumana iimbono kwiividiyo zakho, kodwa ukufumana abaphulaphuli bakho banxibelelane neevidiyo zakho ngomnye umdlalo webhola ngokupheleleyo. Kuya kufuneka ukhumbuze ababukeli bakho ukuba bazibandakanye neevidiyo zakho ngamanye amaxesha. Ukufumana ingxelo kubabukeli bakho kubalulekile. Njengoko ufumana impendulo eyakhayo kubabukeli bakho, ababukeli bakho abanokuthi banyuke kwaye iividiyo zakho ziya kuqala ukufumana ukuqondwa kunye nokuthembeka okubafaneleyo.
Iinzuzo zokuba nenani elikhulu lokuthandwa kuYouTube
Zininzi izibonelelo zokufumana ukuthandwa ngakumbi kukaYouTube. Nalu uluhlu lwezizathu zokuba kutheni ukuthanda kakhulu kukaYouTube kubalulekile ekukhuleni kwetshaneli -
Ukutsala ababukeli: Ababukeli bakholisa ukucinga ukuba umxholo ogqwesileyo uya kuqulatha isixa esibalulekileyo sokuthandwa kunye nezimvo. Okukhona ukuthandwa kukho kwividiyo, kokukhona itrafikhi iya kubhekiswa kuyo. Xa iividiyo kwijelo lakho zinenani elikhulu lokuthandwa, oko konyusa ukuthembeka kwabo emehlweni ababukeli.
Ukuqinisekisa ubukho bentlalontle: Ingcamango yemidiya yoluntu isebenza kumgaqo olula - ngakumbi ukuthanda okanye ukujonga kwividiyo, inkulu amandla oluntu. Ukuthembeka kwakho kwiqonga kuyanda xa unenani elikhulu lokuthandwa. Xa uneemethrikhi ezilungileyo, ababukeli bakholelwa ukuba unento efanelekileyo yokongeza kwisithuba. Ngenxa yale njongo, kubalulekile ukuseka i-niche eqongeni kunye nokuphuhlisa umyalelo phezu kwesifundo. Inani elikhulu lokuthandwa lilawula ngaphandle abakhuphisana nabo kwi-niche yakho kwaye lizisa ijelo lakho phambili.
Ukunyusa izinga lenjini yokukhangela: Ukuba ukhangela nasiphi na isihloko kuYouTube, kuyaphawuleka ngokulula ukuba iividiyo ezibonakala phezulu kuluhlu lweziphumo zophando zezo zinenani elikhulu lokuthandwa. Xa unenani elikhulu lokuthandwa, icoca indlela yakho kwicandelo lokukhangela likaYouTube. Xa umntu ekhangela isihloko esihambelana ne-niche yakho, amathuba okuba ividiyo yakho inyukele phezulu kwizindululo.
Iphulo lokuthengisa eliyimpumelelo: Abathengisi abaninzi be-intanethi basebenzisa uYouTube ukukhuthaza iimveliso ezithile, iinkonzo kunye nomxholo. Ukuba iividiyo zalo naliphi na ijelo elinjalo zifumana inani elifanelekileyo lokuthandwa kunye nokubonwa, oko kubonisa ukuba ukuthengiswa kwedatha iphulo libe yimpumelelo. Ukufumana ukuthandwa ngakumbi kwiYouTube yeyona ndlela ibalaseleyo yokuqinisekisa ukuba imveliso okanye inkonzo inomtsalane ebantwini.
Ukwandisa igunya lakho: Xa ababukeli bebona ukuba iividiyo zakho zinenani elihle lokuthandwa kunye nezimvo, banokukubona njengonegunya phezu kwesihloko. Baya kuthemba umxholo wakho ngokubanika ulwazi oluchanekileyo malunga nesihloko esithile. Njengoko igunya lakho lisanda kwi-niche yakho, uya kukwazi ukuphakama ngaphezu kwabakhuphisana nabo kwaye ukuthandwa kwakho eqongeni kuya kunyuka.
Ukwandisa itrafikhi kwiwebhusayithi yakho: Iividiyo ezinenani elikhulu lokuthandwa zikholisa ukufumana iimbono ezininzi. Iividiyo zeYouTube zinokuba zilungile ekwalathiseni itrafikhi kwiwebhusayithi yakho okanye ishishini. Inani elikhulu lokuthandwa nguYouTube lithetha ababukeli abaninzi, nto leyo ithetha ukuba ikhokele ngakumbi kwinkampani.
Ukukhula kwababhalisi bakaYouTube: Sele sichazile ukuba inani elikhulu lokuthandwa kunye nezimvo kwiividiyo zakho kuthetha ukuba uya kukwazi ukutsala ababukeli abaninzi. Njengoko abantu abaninzi beqala ukujonga umxholo wakho, baya kuqalisa ukubhalisela umxholo wakho. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukufumana ababhalisi abaninzi ngokuthandwa kweYouTube.
Iingcebiso zokufumana okuninzi okuthandwa nguYouTube kwiividiyo zakho
Ukufumana izibonelelo zokwenza imali kwiYouTube, kubalulekile ukunxulumana nababukeli ekujoliswe kubo. Ukwakha isiseko sabaphulaphuli ababandakanyekayo kuthatha ixesha kunye nomzamo. Enye yeengxaki ezinkulu ezikhulayo ezijongene nazo kukwenza abantu banxibelelane neevidiyo. Kungenzeka ukuba unabantu abaninzi ababukele iividiyo zakho, kodwa uninzi lwabo lushiya ukuthanda. Ke kuya kufuneka ubandakanye izikhumbuzo rhoqo ucela ababukeli bakho ukuba bathumele izimvo kwaye bathande iividiyo zakho. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukonyusa uhlalutyo lwakho lokubandakanyeka kuYouTube.
Kwicandelo elilandelayo, siya kukunika iingcebiso ezininzi zokwandisa inani lokuthandwa kwiividiyo zakho. Ukusebenzisa ezi ngcebiso unokuphuhlisa isicwangciso sakho sokwandisa amaxabiso okuzibandakanya kwiqonga. Kukho enye inketho yokwandisa ukuthanda kwakho kukaYouTube, onokuthi ukubandakanye ukongeza ekusebenziseni ezi ngcebiso. Kukuthenga izinto ezithandwa nguYouTube kwimithombo ethembekileyo. Xa uthenga izinto ezithandwa nguYouTube, unokuqinisekisa ukukhula kwejelo lakho kwaye akukho xesha uya kuqala ukubona ababukeli bokwenyani kunye nababhalisile bebandakanyeka kumxholo wakho.
Ukwandisa ukuthandwa ngumxholo wevidiyo
Ukuba ufuna ukufumana ukuthandwa ngakumbi kwiYouTube, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba umxholo wakho wevidiyo ulungele ukuqala. Nanga amanye amacebiso okuphucula umxholo wakho wevidiyo ukuze ufumane ukuthandwa kakhulu nguYouTube.
1. Yenza umxholo owonwabisayo nofundisayo
Abantu beza kwiYouTube ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Ngamanye amaxesha, banokufuna ukufunda okuthile ngesihloko kwaye ngamanye amaxesha banokufuna nje ukonwabisa. Xa usenza iividiyo eqongeni, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba unika elona xabiso lilungileyo kubaphulaphuli ngokweemfuno zabo. Kwangaxeshanye, akufuneki ulalanise kumgangatho. Unokufunda oko abaphulaphuli bafuna ukukubona ngokwenza uphando lwegama elingundoqo. Ezinye zezona zihloko ziphandwa kakhulu kuYouTube kukutya, ukuzonwabisa, umculo, ezemidlalo, imidlalo, ukuhamba, ezemidlalo, ubuhle, kunye nefashoni. Kungenjalo, unokwenza i-poll ye-intanethi. Kwakhona, qiniseka ukuba ifomathi yeevidiyo zakho ihambelana nezinto ezithandwa ngabaphulaphuli bakho. Unokucinga ngokwenza iividiyo, uphononongo lwemveliso, ukungabhoxi, i-10 ephezulu, ukuhanjiswa kwemveliso, i-Q&A, njl.
2. Jonga kwiintsingiselo zentsholongwane
Unokufumana isixa esihle sokuthandwa kumxholo wakho ngokwenza iividiyo ezisekwe kwisihloko esele sihamba phambili. Ngale ndlela, ungasebenzisa iindlela zentsholongwane ukuze kulungelwe nina. Xa esinye isihloko sihamba nentsholongwane, abantu bafuna ukufunda ngakumbi ngaso. Unokuthatha umzekelo womngeni webhakethi yomkhenkce, umzekelo. Xa umceli mngeni wawuqala ukuphuma, abantu babefuna ukufunda ngakumbi ngawo kuba babone abantu abaninzi abadumileyo bezama okufanayo. Unokujolisa iividiyo zakho kwizihloko ezihamba phambili kwiindaba kunye nenkcubeko eyaziwayo. Ukubopha iividiyo zakho ngeendlela ezithandwayo akusoloko kulula, nangona kunjalo, unokonyusa izinto ozithandayo eqongeni ngokwenza umxholo ongaphezulu.
3. Ukusebenzisana nabasebenzisi be-YouTube
Enye indlela entle yokuqhuba ababukeli abaninzi ukuba bathumele ukuthanda kunye nezimvo kwiividiyo zakho kukusebenzisana nabanye abasebenzisi bakaYouTube. Unokufumana unxibelelwano olukhulu kubabukeli ngokubonisa abaphembeleli boshishino kwiividiyo zakho. Oku kungenxa yokuba aba baphembeleli bakholisa ukuba ngabaphulaphuli abasele bekho. Xa usebenzisana nabanye abasebenzisi beYouTube, ukhuthaza ababukeli babo ukuba bajonge nejelo lakho.
Iimbono ezongezelelekileyo ziya kuthetha ukuthanda kunye namagqabantshintshi. Ukongeza kokongeza kubabukeli bakho, ukusebenzisana ne-YouTubers kunokubonelela ngenye imbono kwisihloko se-niche yakho. Oku kunika igunya elingakumbi kwijelo lakho kwisithuba sikaYouTube. Ukusebenzisana nabanye abasebenzisi be-YouTube kunokuba luncedo ngokufanayo, njengoko kuya kwandisa ukuthandwa kunye namazinga okuzibandakanya kuwo omabini amajelo.
4. Amakhadi kaYouTube
Unokufumana ababukeli abaninzi ukuba babukele ividiyo yakho kwaye ekugqibeleni uthumele amagqabantshintshi kunye nezinto abazithandayo ngokusebenzisa inqaku lamakhadi kaYouTube. Amakhadi kaYouTube akwenza ukuba ukhuthaze ezinye iividiyo zakho ngaphakathi kwevidiyo. Unokusebenzisa amakhadi kaYouTube -
Ukukhuthaza ezinye iividiyo kwijelo lakho
Ukukhumbuza abantu ukuba bashiye ukuthanda
Ukukhuthaza abasebenzisi ukuba bagcwalise iivoti
Ukwalathisa ababukeli kwiphepha lakho lokufika elinikezelweyo
Ngomnikelo kumbutho ongenzi nzuzo
Ukufumana ababhalisi bejelo abaninzi
Ukuthumela itrafikhi kwiwebhusayithi yakho
Amakhadi kaYouTube anokuba mahle ekukhuthazeni iividiyo zakho ezingaqhubi kakuhle ezinombono kunye nezinto ezithandwayo ezimbalwa. Ukongeza amakhadi kwiYouTube yakho, kubalulekile ukujonga ukuba yeyiphi ingongoma eyehlayo yeembono kwicandelo lohlalutyo lweYouTube. Kuya kuba licebo elihle ukongeza amakhadi eYouTube ngaphambi nje kwelo nqaku.
5. Izikrini zokuphela kwevidiyo
Unokusebenzisa inqaku lesikrini sokuphela ukubandakanya umnxeba kwisenzo kwijelo lakho likaYouTube. Ungasebenzisa isikrini sokugqibela ukwazisa ababukeli ngakumbi malunga nejelo lakho, kwaye unokubacela ukuba bathande iividiyo zakho. Izikrini zokuphela zingasetyenziselwa ukucebisa ukuba yeyiphi ividiyo ekufuneka uyibukele ngokulandelayo. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukwalathisa ababukeli bakho kwezinye zeevidiyo zakho ezifumene iimbono ezincinci kunye nezinto ezithandwayo ngaphambili. Ukongeza izikrini zokugqibela kwividiyo yakho kuya kufuneka ujonge isitudiyo sikaYouTube kwaye ucofe i icon yepensile ukujonga iinkcukacha zevidiyo. Kwelo candelo, uya kufumana ukhetho lweSkrini sokuphela. Unokukhetha ukongeza uhlobo lwesikrini sokugqibela olufunayo kukhetho oluluhlaza okwesibhakabhaka, kwaye emva koko, konke okufuneka ukwenze kukucofa ukugcina.
6. Ukunyuswa kweevidiyo ezinqamlezayo kumaqonga eendaba ezentlalo
Enye indlela entle yokwandisa ukuthandwa kwiYouTube kukukhuthaza iividiyo zakho kwamanye amaqonga eendaba ezentlalo. Uninzi lwezinye iinethiwekhi zemidiya yoluntu ezifana ne-Facebook, Instagram, kunye ne-Twitter zinomxholo wevidiyo. Ezi tshaneli zinokusetyenziselwa ukuthengisa iividiyo zakho ngokunqamleza ukunyusa inani leembono, izinto ozithandayo, kunye nababhalisi. Kwi-Instagram, ungasebenzisa inqaku lamabali ukwabelana ngeevidiyo zakho zeYouTube kwaye wongeze ikhonkco kwividiyo kwi-bio yakho. Ukuthengisa iividiyo zakho zeYouTube yindlela elungileyo yokubonisa abalandeli bakho ukuba unoluntu olusebenzayo kuYouTube kwaye banokuba yinxalenye yalo nto. Njengoko ababukeli abatsha bebukele iividiyo zakho, baya kuthumela izimvo kunye nezinto abazithandayo.
Ukwandisa ukuthandwa yi-SEO
Ukuba ufuna ukwandisa ababukeli bakho kunye nokuzibandakanya kwiqonga, kubalulekile ukufunda malunga neendlela zokukhangela injini yokukhangela (SEO). I-algorithm yeYouTube ihluza umxholo kwiinjini zokukhangela ngokusekelwe kwizinto ezithile. Ke, kuyabaluleka ukukhulisa izihloko zakho, iithegi, kunye nenkcazo yeevidiyo. Nazi ezinye iindlela zokwandisa ukuthanda kwiividiyo zakho zeYouTube ngeSEO:
1. Ukudala izihloko zevidiyo ezinamagama angundoqo atyebileyo
Uphando lwegama elingundoqo lubalulekile ukuqinisekisa ukuba umxholo wakho ufikelela kubabukeli ekujoliswe kubo. Ngamabinzana kunye namagama asetyenziswa ngabantu ukukhangela umxholo. Xa usenza umxholo wakho malunga namagama angundoqo ekujoliswe kuwo, unokuqinisekisa ukuba ii-injini zokukhangela zibancomela kubabukeli ekujoliswe kubo. Ukonyusa amathuba akho okufumana iimbono ezininzi kunye nezinto ozithandayo ngokongeza amagama abalulekileyo kwisihloko sakho. Ngale ndlela, ababukeli bakho baya kukwazi ukufumana umxholo wakho ngokulula ngakumbi. Kukho ininzi yezixhobo zophando zamagama angundoqo ezikhoyo kwi-intanethi ezinokuthi zisetyenziswe ukufumana amagama angundoqo afanelekileyo. Enye indlela yokufumana amagama angundoqo e-YouTube kukufaka isihloko kwibha yokukhangela. Amagama angundoqo zizinto eziqikelelweyo ezithi zivele xa ukhangela isihloko. La magama aqikelelweyo yeyona nto ifunwa ngababukeli abaninzi.
2. Yongeza amagama angundoqo kwiinkcazo zevidiyo
Unokwandisa iinkcazo zevidiyo yakho njengezihloko zevidiyo. Inkcazo yevidiyo yindawo apho ababukeli bafunda malunga neevidiyo zakho. Ingasetyenziselwa ukunyusa izinga lakho kwiziphumo zophando ngokusetyenziswa kwamagama angundoqo afanelekileyo. Ngokusebenzisa isicwangciso segama elingundoqo awuyi kuphucula kuphela izinga lokucofa kodwa ukwandise ukuthanda kwakho kunye nemibono. Inkcazo yevidiyo kufuneka iyilwe ngendlela yokuba ibambe umdla wabaphulaphuli, ngelixa ibandakanya amagama angundoqo aluncedo.
3. Yongeza iithegi kwiividiyo zikaYouTube
Iithegi zevidiyo kuYouTube zilungile ngokuhlela umxholo wakho kwi-algorithm yokukhangela. Kuyanceda ukuqonda ukuba yeyiphi isihloko ividiyo yakho ejolise kuyo. Ukongeza kwisihloko sevidiyo kunye nenkcazo, iithegi zevidiyo mazisetyenziswe ngokufanelekileyo kwiividiyo zakho. Unokujonga kwakhona kwiithegi zevidiyo ezisetyenziswe ngabakhuphisana nabo ukuphuhlisa ukuqonda kwezinto ezifanelekileyo kwi-niche yakho. Ukujonga iithegi kuyo nayiphi na ividiyo, la manyathelo alandelayo angalandelwa -
Yiya kwividiyo kaYouTube usebenzisa nasiphi na isikhangeli sewebhu.
Cofa ekunene kwiphepha kwaye ukhethe "Jonga uMthombo wePhepha."
Cofa u-Ctrl + F (yeWindows) okanye uMyalelo + F (yeMac). Ikhowudi yomthombo iya kuvela enokuthi isetyenziswe ukukhangela amagama angundoqo.
Uya kuba nakho ukujonga uluhlu lweethegi ezisetyenziselwa loo vidiyo.
4. Sebenzisa umfanekiso we-thumbnail kuncedo lwakho
Unokufumana ukuthandwa ngakumbi kwiividiyo zakho ngokwenza ngcono imifanekiso yemifanekiso yeevidiyo zakho. Imifanekiso ye-Thumbnail ibalulekile ekwenzeni ividiyo yakho igqame kwiphepha lasekhaya likaYouTube, uludwe lwevidiyo olucetyiswayo, iziphumo zevidiyo zenjini yokukhangela, kunye nakumajelo asekuhlaleni. Ukuba ne-thumbnail ebambe iliso kwividiyo yakho kunokukhuthaza abantu abaninzi ukuba bajonge kwaye bathumele izimvo kunye nezinto abazithandayo kumxholo wakho. Ubungakanani obucetyiswayo kwiividiyo bujikeleze i-1280 × 720, ekufuneka ibe nobubanzi obuncinci beepikseli ezingama-640. Imifanekiso ekumgangatho ophezulu kufuneka ibe neefonti ezibandakanyayo ukwandisa ukufundeka. Unokusebenzisa ukuvala ubuso ukuvuselela unxibelelwano lweemvakalelo kunye nabaphulaphuli. I-thumbnail kufuneka ihambelane nomxholo wakho wevidiyo. Ukusebenzisa i-clickbait hacks yokwandisa i-thumbnails ayisokuze ibe ngumbono olungileyo njengoko ilahlekisa ababukeli.
5. Sebenzisa ushicilelo lwevidiyo
Ushicilelo lwevidiyo lwaziwa njengeenkcazelo ezivaliweyo kuYouTube. Ukukhutshelwa kwevidiyo kunokuphucula umgangatho wevidiyo yakho eqongeni kwaye kubenze bafikeleleke ngakumbi. Ngokusebenzisa amagama avaliweyo, abaphulaphuli abaninzi banokujonga iividiyo zakho. Oku kubangelwa kukuba uninzi lwabaphulaphuli lusenokuba aluthethi ulwimi olunye okanye banokuba nabangeva kakuhle. Ngokubandakanya amagama avaliweyo, wenza iividiyo zifikeleleke ngakumbi kubo kwaye umeme ababukeli abaninzi ukuba bazibandakanye nomxholo wakho kwaye bathumele izimvo kunye nezinto abazithandayo.
Ukuthenga okuthandwayo kuYouTube-Ukubaluleka kunye neeNzuzo
Ukubaluleka kokuthandwa kweYouTube sele kuchaziwe kumanqaku akhankanywe ngasentla. Enye indlela yokufumana ukuthandwa ngakumbi kwiividiyo zakho kukucela ababukeli bakho ukuba bathande, babelane kwaye babhalise kwijelo lakho. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha unokungafumani nxaxheba efunekayo kubabukeli bakho nasemva kokusebenzisa zonke izicwangciso ezikhankanywe ngasentla. Kwimeko enjalo, iya kuba licebo elilungileyo ukuhlawulela ukuthanda kukaYouTube kubaboneleli benkonzo abathembekileyo abanje ngeYTpals.
Ukuthenga izinto ezithandwa nguYouTube kuya kukufumana uthotho lokubukela, oluya kuthi ekugqibeleni lukhuthaze abantu abaninzi ukuba babhalise kwijelo lakho kwaye bazibandakanye nomxholo wakho. Iividiyo zakho zinokuvezwa kubaphulaphuli abatsha, ebebengenakukwazi ukufumana ijelo lakho ngenye indlela. Makhe sijonge ezinye zezibonelelo zokuthenga izinto ezithandwa nguYouTube.
1. Inika ijelo lakho ubungqina bentlalontle eqongeni
Ukuba ufuna ukwenza ividiyo yakho ibe yintsholongwane kwaye uthengise umxholo wevidiyo, kubalulekile ukuba ube negunya elithile eqongeni. Njengoko sele kukhankanyiwe kweli nqaku, ukuthandwa okanye ubukho eqongeni kunokunyuswa ngokuphucula imetriki yesitishi sakho sikaYouTube. Izinto ezithandwa nguYouTube ziyimetric ebalulekileyo yokulinganisa ukuma kwetshaneli. Xa uthenga izinto ezithandwayo, uya kukwazi ukufumana ukuqondwa kunye nokwandisa ukuthembeka eqongeni. Isebenza njengobungqina bentlalontle, eya kukunceda ufumane ababukeli abaninzi kunye nababhalisi kwixesha elizayo.
2. Ukunyusa umgangatho kwiziphumo zophando
Eyona ndlela yokwandisa ukubonwa kweevidiyo zakho kukwenza ukuba zibonakale kwiziphumo zokukhangela. Ngokophando lwakutsha nje, ngaphezulu kweepesenti ezingama-60 zababukeli kwiYouTube bakhangela iividiyo ngezihloko ezikwibar yokukhangela kunokundwendwela itshaneli. Ungalonyusa izinga leevidiyo zakho kwiziphumo zokukhangela ngokuphucula iimetrics zakho ezibandakanya ukuthanda, iimbono kunye nezimvo. Xa uthenga izinto ezithandwa nguYouTube, icebisa kwi-algorithm yeYouTube ukuba amaxabiso akho okuzibandakanya aphezulu. Ngale ndlela, uya kukwazi ukubeka phezulu phezulu kwiziphumo zokukhangela xa abantu befuna isihloko se-niche yakho. Ekugqibeleni, ijelo lakho liya kuba nakho ukuvelisa ithrafikhi yezinto eziphilayo, okuya kwandisa amaxabiso okuzibandakanya nangakumbi.
3. Ukutsala abantu ekujoliswe kubo
Nje ukuba wenze ividiyo ngesihloko, ufuna ukuqinisekisa ukuba ifikelela kubaphulaphuli abafanelekileyo abalixabisayo igalelo lakho. Unokuqinisekisa ukuba ividiyo yakho ifikelela kubaphulaphuli ekujoliswe kubo ngokuthenga izinto ezithandwa nguYouTube kwimithombo ethembekileyo njengeYTpals. Xa unenani elikhulu lokuthandwa kunye nezimvo kwiividiyo zakho, oko kubonisa ukuba unegunya elithile kwisihloko. Ababukeli abatsha ekugqibeleni baya kuluthemba uhlobo lomxholo owenzayo. Ukuthenga izinto ezithandwayo sisicwangciso esihle sokutsala abaphulaphuli bakho.
4. Ukuqhuba itrafikhi kwamanye amaqonga eendaba ezentlalo
Xa uhlawula ukuthanda, kwandisa ukubonakala kwakho eqongeni. Ababukeli banokufumana umxholo wakho ngokulula kwaye emva koko inani lakho lababhalisile liqala ukwanda ngokuthe chu. Ukujongwa kwakho kuYouTube kunokubhekiswa kwamanye amaqonga eendaba ezentlalo apho ufuna ukuseka ubukho obunamandla ngokulinganayo. Oku kuluncedo ngakumbi ekuthengiseni iimveliso zakho ukuba uneshishini. Abantu baziwa ngokutsalela kumxholo wevidiyo, ukuze ukwazi ukwalathisa itrafikhi yeYouTube kwiwebhusayithi, enokuba luncedo kakhulu ekwandiseni ukuthengiswa kweemveliso okanye iinkonzo.
5. Ukuqalisa uhambo lukaYouTube
Xa uqala isitishi, kunokuba nzima ukufumana ababukeli ukuba babukele umxholo wakho. Ukuba ufuna ukuqalisa umsebenzi wakho weYouTube, ukuthatha inxaxheba kwiividiyo zakho zokuqala kubaluleke kakhulu. Ukuthenga izinto ezithandwa nguYouTube kunokukubeka kwicala elifanelekileyo kwaye ijelo lakho liya kuba nakho ukuqala ngamandla. Iyakwandisa ukubonwa kwakho eqongeni, kwaye ngokuhamba kwexesha ababhalisile bakho baya kuhlala bebandakanyeka kumxholo wakho. Inokukunceda ekuthatheni umsebenzi wakho weYouTube uwuse kwinqanaba elilandelayo.
6. Ukufumana ukuthandwa
Ukuba ufuna ukuba yimvakalelo yeYouTube, ke ukuthenga izinto ezithandwa nguYouTube kunokukubeka kwindlela elungileyo yokufezekisa iinjongo zakho. Ukufumana udumo kuYouTube ivula ihlabathi lamathuba abantu, kuquka inkxaso-mali. Ukuba uyaqhubeka nokwenza iividiyo ezibandakanyekayo, uya kuba nakho ukwakha isiseko esizinikeleyo sababhalisile. Abayi kubandakanyeka kuphela kumxholo wakho kodwa bayawukhuthaza.
7. Ukuhlala phambili kukhuphiswano
IYouTube liqonga elikhuphisana kakhulu, apho izigidi zeevidiyo zongezwa yonke imihla. Ukuba ufuna ukuhlala uphambi kokhuphiswano, kuya kufuneka usebenzise iindlela ezithile eziya kunceda ekukhuleni kwakho. Amathuba uninzi lwabakhuphisana nawe bathenga izinto ezithandwa nguYouTube kunye nezimvo. Ngaloo ndlela, kuya kuba yinto efanelekileyo ukuthenga UYouTube uyathanda kwitshaneli yakho ukuba awufuni ukuba sengozini.
Ngoku sele uqhelene nokubaluleka kunye nezibonelelo zokuthenga izinto ezithandwa nguYouTube, unokucinga ngokuzithengela ijelo lakho ukunceda ekukhuleni kwabo. Xa uthenga izinto ezithandwayo kwi-YTpals, uya kuba nakho ukonyusa ugcino lwababukeli kwiividiyo zakho. Iziphumo ziya kuqalisa ukuvela kwiiyure ezingama-24 ukuya kwii-72 emva kokubeka iodolo, kwaye okuthandwayo kuya kuhanjiswa ngabantu bokwenyani kunokuba i-bots. Ungaqhakamshelana nathi namhlanje ukuze wazi ngakumbi malunga neenkonzo eziphambili zikaYouTube YTpals.
Ukuthandwa ngu-YouTube kuye kwongezwa kwinqwelo yakho.
Iimbono ezili-1000 ($ 20)Iimbono ezili-5000 ($ 60)Iimbono ezili-10000 ($ 100)Iimbono ezili-25000 ($ 200)Iimbono ezili-50000 ($ 350)Iimbono ezili-100000 ($ 600)
Izabelo ezili-100 ($ 10)Izabelo ezili-250 ($ 20)Izabelo ezili-500 ($ 30)Izabelo ezili-1000 ($ 50)Izabelo ezili-2000 ($ 80)Izabelo ezili-5000 ($ 130)Izabelo ezili-10000 ($ 250)